Websoft IT Nepal Pvt. Ltd. at RSS 6
RSS6| Websoft IT Nepal Pvt. Ltd.
२७ माघ, काठमान्डौँ बाल गायक अधिश्री कस्पालको आवाजमा सजिएको गीत ञम एक परदेशी ’ सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक यस गीतमा लोकपप गायक म्याक्स नेपालको शब्द रचना तथा संगीत रहेको छ भने गीतलाई सुदिप सगरले एरेन्ज गरेका छन । ड्याईनमिक डिजिटल स्टुडियो कतारमा रेकर्ड गरिएको यस गीत निकै मोहक र देश प्रेमी भावमा रहेको छ […]
(Published: Mon, 11 Feb 2019 08:13:37 +0000)
देउवाले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा कांग्रेस नैतिक रुपमा बाँधिएको भन्दै डा. केसीको मुद्दाका लागि लडिरहने बताए । सरकार भने निकै अशंवेदनशील देखिएको उनले बताए । देउवाले भने, ‘तपाईको ज्यान तलमाथि भएपनि सरकारलाई मतलब छैन । हामीलाई भने मतलब छ ।’ आफू र आफ्नो पार्टीको मात्र नभई सबै नेपालीको भावना भन्दै उनले अनसनबाट उठ्न आग्रह गरे । […]
(Published: Fri, 01 Feb 2019 02:14:24 +0000)
चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्नुअघि राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा. केसीको जीवनरक्षाप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । विधेयक पास भएपछि अब डा. केसीसँग वार्ता हुन सक्ने उनको संकेत थियो । तर, केही घण्टामै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने वार्ताको सम्भावनालाई खण्डन गरे । अनसनको विषय सकिएको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले डा. […]
(Published: Fri, 01 Feb 2019 02:11:49 +0000)
दोलखाको प्रसिद्ध मन्दिर भीमेश्वरमा मंगलबार दिउँसो पसिना आएको बताइएको छ। भीमेश्वर नगरपालिका २ मा रहेको नेपालकै प्रसिद्ध मन्दिर भिमेश्वरमा दिउँसो तीन बजेर २० मिनेट जाँदा पसिना आएको बताइएको छ। मन्दिरमा पसिना आएको सूचना पाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु विक्रम थापा र प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्की मन्दिरतर्फ गएका छन्। प्रजिअ थापाले मन्दिरमा पसिना आएको खवर पाएपछि […]
(Published: Mon, 21 Jan 2019 20:43:08 +0000)
२ माघ, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेहरुमाथि कठोर कारवाहीको माग भइरहेका बेला सरकारले नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । संघीय संसदमा पेश हुन लागेको नयाँ विधेयकले सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने, सामाजिक सद्भाव विथोल्ने र साइबर बुलिङ गर्नेलाई कडा सजायको प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै अनलाइन समाचार पोर्टलमा अपुष्ट र हावादारी कुरा सम्प्रेषण […]
(Published: Thu, 17 Jan 2019 16:32:26 +0000)
आलगालीबाट ध्वस्त गाउँ र आलगाली घरमा छरिएका रक्सीका बाेतल । तस्बिरः बिस्नुप्रसाद न्यौपाने बिस्‍नप्रसाद न्याैपाने कालिकोट�: कालिकोटको खाडामा भएको आलगाली गराउने क्रममा रक्सी पार्टीमा �सहभागी भएको आशंकामा कममा वडा सचिव पक्राउ परेका छन् ।� वडा सचिव बिष्णुकान्त प्याकुरेललाई शनिबार बेलुका पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ। वडा अध्यक्षमानबहादुर भण्डारीसहित ५ जनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी […]
(Published: Sun, 06 Jan 2019 10:02:31 +0000)
धनगढी�: सशस्त्र प्रहरीले भन्सार छली ल्याउँदै गरेको हार्डवेयरका सामग्री बरामद् गरेको छ। आइतबार बिहान सशस्त्र प्रहरी कैलाली नम्बर ५३ गुल्मका सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक जयबहादुर महराको कमाण्डमा खटिएको मोबाईल टीमले सामग्री बरामद् गरेको हो। धनगढी उपमहानगरपालिका- ९ बंग्राकटानबाट २ लाख १४ हजार बराबरको सामग्री बरामद् गरेको महराले जानकारी दिए । बरामद सामग्री आइतबार कैलाली भन्सार […]
(Published: Sun, 06 Jan 2019 09:57:42 +0000)
महोत्तरी�: एका बिहानै लौका, काँक्रा, फर्सीको बोटमा सिँचाई गर्न धनुषाको ढल्केवरका एक किसान गाग्रीमा पानी लिएर खेततर्फ जाँदैं। पानीको अभावमा यहाँका किसान दैनिक� टाढाबाट पानी ओसारेर लहरे बाली उब्जाउँदै आएका छन्। प्रदेश – २ कृषिमा निर्भर भएपनि सिँचाई�अभाव हुँदा किसान अकाशे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन्। source:annapurnapost
(Published: Sun, 06 Jan 2019 09:39:42 +0000)
सिरहा :�सिरहाको सीमावर्ती भगवानपुर गाउँपालिकामा असारमै सकिनुपर्ने गाउँसभा दलीय किचलोका कारण हुन सकेको छैन । संघीय समाजवादी फोरम र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का जनप्रतिनिधिबीच शिक्षा, न्यायिक, विपद् व्यवस्थापन समिति गठनमा मतभेद कारण गाउँसभा विवादमा परेको हो । गाउँसभा नहुँदा ०७५�७६ को बजेट सञ्चालन पनि भएको छैन । कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा विषयगत कार्यालयका (शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु) […]
(Published: Sun, 06 Jan 2019 09:34:21 +0000)
भरतपुर :�एलएलसी उत्तीर्ण गरेपछि हात्तीबाङकी शर्मिला चेपाङको लागि उच्च शिक्षा अध्ययनको उपाय थिएन। राम्रो अंक ल्याए पनि कमजोर आर्थिक अवस्थाले आफूलाई पढ्न सहज हुनेमा उनलाई आशंका नै थियो। चेपाङ समुदायमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने चलन उति नभए पनि शर्मिलामा भने यसको हुटहुटी कायमै थियो। आर्थिक अभावले पढ्न नपाउने अवस्थाकी शर्मिलामाथि दाताको आँखा परेपछि उनले स्टाफ […]
(Published: Sun, 06 Jan 2019 09:30:32 +0000)
( Source: http://www.websoftitnepal.com/feed )
police car security streamaxtech Barrie Orthotics. CPR Home Art Kentro Dubai credit card holder Legal: Patents streamax australia